Hampandre ny contact anao ho azy ny WhatsApp fa nanova ny nomeraon-telefaonao | Vaovao momba ny gadget
Raha hatrizay nampiasanao WhatsApp Nanova ny nomeraon-telefaonanao ianao, azo antoka fa tsapanao fa, raha tianao hahalala momba izany fanovana izany ny olona iray, dia tokony hampandre azy ireo mivantana ianao. Ity dia fomba iray izay na dia ao amin'ny FAQ ofisialin'ny lampihazo aza dia faritana fa, mandraka ankehitriny, dia tsy maintsy natao toy izany.
Anisan'ireo fiasa vaovao antenaina amin'ny andiany manaraka, satria efa tafaporitsaka izany, toa nampihatra fampiasa vaovao ireo mpamorona sehatra hahafahan'ny WhatsApp manao ny asa rehetra ho anao. Amin'ny ankapobeny ny zavatra hataon'ilay fampiharana dia mandefasa fampandrenesana amin'ireo mpampifandray anao rehetra rehefa manova ny nomeraon-telefaonanao ianao. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nisy naneho hevitra ofisialy raha toa ka mety ho kilemaina tanana ity.
Hampandre ny contact anao ny WhatsApp fa nanova ny nomeraon-telefaonanao ho azy ianao.
Araka ny efa nolazainay, farafahakeliny amin'izao fotoana izao, tsy misy karazana fanambarana ofisialy milaza fa tena miasa tokoa io WhatsApp io, na dia mpampiasa marobe mahalala tsara aza fa marina izany ary fotoana fohy fotsiny alohan'ity karazana fampitandremana ity ao amin'ny WhatsApp Beta Noho izany, ny fandrarana dia misokatra amin'ny vinavinany momba ny mety hampiasana azy.
Miverina amin'ny fiarahamonina dia maro ireo mpampiasa izay, ankoatry ny fanamafisana fa miasa amin'ity zava-baovao ity izy ireo, dia manambara fa ny fampiharana, rehefa manova ny nomeraon-telefaona, dia hanome safidy roa antsika, hampandre ny fifandraisantsika rehetra amin'ilay fanovana na ny fifandraisana izay nifampiresahantsika tato ho ato. Ny olana indray dia ao inona no hitranga raha tsy te hampandre an'izay fifandraisana nifandraisantsika tato ho ato isika ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Hampandre ny contact anao ho azy ny WhatsApp fa nanova ny nomeraon-telefaonanao ianao
Zelda: Breath of the Wild dia efa mandeha tsara amin'ny PC